ဝါစင်္ဂ (၈)မျိုးရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဘာကြောင့် အရေးကြီးရတာလဲ? -
ဝါစင်္ဂ (၈)မျိုးရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဘာကြောင့် အရေးကြီးရတာလဲ?
Posted on February 8, 2019 February 8, 2019 Author Myat Moe	Comment(0)
ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ စကားလုံးက ဘယ် Part of Speech မှန်းသိပြီဆိုရင် သဒ္ဒါအထားအသို မှားမှာ သိပ်စိတ်မပူရတော့ဘူးလေ။
အင်္ဂလိပ်စာစသင်မယ်ဆိုရင် အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အသုံးအဝင်ဆုံး၊ မသိမဖြစ်ကတော့ Eight parts of speech ဆိုတဲ့ ဝါစင်္ဂ (၈) မျိုးလို့ပဲ ပြောရမယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထဲမှာ ရှိသမျှ စကားလုံးတိုင်းကို part of speech နဲ့ခွဲခြားလို့ရတာမို့ ဘယ်စကားလုံးဟာ ဘယ် part of speech ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် စာကြောင်းတွေ ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Part of speech ဟာ ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာရဲ့ နောက်ထပ် reason တစ်ခုကတော့ Grammar pattern တွေကြောင့်ပါ။ Noun ရှေ့မှာဘာရှိတယ်၊ Adverb နောက်မှာ ဘာလိုက်တယ်၊ Conjunction ကို ဘယ်နေရာမှာသုံးရမယ် စသည်ဖြင့် တိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိနေတာကြောင့် ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးရဲ့ Part of speech ကို သိနေမယ်ဆိုရင် အမှားအယွင်းမရှိ Grammar မှန်ကန်တဲ့ Sentence တွေ ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
ဒါဆို အဲ့ Part of Speech ၈ မျိုးကို အကြမ်းဖျဉ်းအရင်ပြောကြည့်ရအောင်နော်။ ပါဝင်တာတွေကတော့ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Conjunction, Preposition နဲ့ Interjection တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာကျက်ခဲ့ရသလိုပါပဲ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့၊ ဒြပ်ရှိ၊ ဒြပ်မဲ့ အရာအားလုံးပေါ့။ လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ အရာဝတ္ထု၊ အတွေးအမြင်၊ ခံစားချက်။ ဒါတွေအကုန်လုံးဟာ နာမ်ပါ။
Noun ကို proper noun နဲ့ common noun ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပြန်ခွဲပါတယ်။
Proper noun တွေကတော့ လူတွေ၊ နေရာတွေရဲ့ နာမည်ပါ။ Capital letter တွေနဲ့ ရေးရပါတယ်။
ဥပမာ – John Smith, Yangon University.
Common noun တွေကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် သုံးနေတဲ့ noun တွေပါ။ Capitalize လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာ – book, chair, bags.
Related article >>> Gerund ဆိုပြီး လူသိနည်းတဲ့ Ving form
အပြုအမူတွေ၊ အခြေအနေတွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ စကားလုံးပါ။
များသောအားဖြင့် verb ဆိုရင် action ကို ပြတယ်ဆိုပြီးပဲ သတ်မှတ်ထားကြတာ များပါတယ်။ run, walk, play, sing စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အချို့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ verb တွေကျတော့ action ကို မပြဘဲ ရှိမှု၊ ဖြစ်မှုတွေကို ပြပါတယ်။ ဥပမာ – is, are, was, were. Verb တွေကို သုံးတဲ့အခါ အချိန်အခါနဲ့ အခြေအနေတွေကို လိုက်ပြီးတော့ Tense အမျိုးမျိုးကို အလိုက်သင့် ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။
Noun ရဲ့ အစားသုံးပေးတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။
များသောအားဖြင့် Noun ကို အရင်ဖော်ပြပြီးမှ Pronoun သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ – Sam likes pizza, but he doesn’t like pasta. ဒီလိုမျိုးဘာလို့ သုံးရလဲဆိုရင် တစ်ခါတစ်ရံ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ pronoun တွေ သုံးရတတ်ပါတယ်။ အဲ့အခါ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Noun ကို အရင်မသုံးထားမိရင် ဘယ်ဟာရဲ့ အစားထိုးလိုက်မှန်း မသိဘဲနဲ့ ရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Adjective ကတော့ Noun ကို အထူးပြုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်၊ နေရာတစ်နေရာ၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့ဝိသေသကို ပိုပေါ်လွင်အောင် သုံးပေးရတာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ – Jim isatall and skinny man ဆိုတဲ့ sentence မှာ Tall ရော Skinny ရောက Jim ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ပိုပေါ်လွင်အောင် အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
Related article >>> Native Speaker လိုပြောနိုင်ဖို့ collocations တွေ လေ့လာကြမယ်
Adjective လိုအလားတူပါပဲ။ သူကတော့ Verb ကို အထူးပြုပြီးတော့ Verb နောက်မှာ ကပ်ပါရင်ပါ၊ မပါရင် စာကြောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အတွေ့များပါတယ်။ ဥပမာ – Helen walked slowly towards the door ဆိုတဲ့ စာကြောင်းမှာ slowly ဆိုတဲ့ Adverb က Helen ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်သွားလဲဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
အချိန်ပြ၊ နေရာပြပုဒ်ပါ။ ဒီဟာကတော့ တော်တော်ရိုးရှင်းတဲ့အတွက် အများကြီးပြောစရာတော့ မရှိဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ ဥပမာ စာကြောင်းထဲမှာဆို towards က preposition ပေါ့။ အခြား preposition တွေဖြစ်တဲ့ at, to, in front of ဒါတွေလည်း သိထားပြီးသား မဟုတ်လား ယောင်းတို့ရေ။
စာကြောင်း တစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းဆက်ဖို့၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပေါင်းဖို့အတွက် သုံးတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့။ Conjunction မှာ လေးမျိုးခွဲထားပါတယ်။
Coordinating conjunctions >> for, and, nor, but, or, yet, so << Complete sentence တွေကို ဆက်စပ်တာမျိုးအတွက် သုံးပါတယ်။
Subordinating conjunctions >> after, as, although, before, before, if, once, since, unless, until, while << တွေကတော့ မပြည့်စုံတဲ့ စာကြောင်းတွေကို ပြည့်စုံတဲ့စာကြောင်းတွေနဲ့ တွဲသုံးချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
Conjunctive adverbs >> moreover, also, instead, however, therefore, in fact, finally,… << တွေကိုတော့ ရှေ့မှာရေးထားတဲ့ စာကြောင်းကို နောက်ကစာကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးကြပါတယ်။
Correlative conjunctions >> both—and, too—to, either—or,…<< တွေကိုတော့ အကြောင်းအရာတူဖြစ်စေ၊ မတူတာတွေဖြစ်စေ တစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ ဆွဲချူံ့ပြီးရေးချင်တဲ့အခါ သုံးကြပါတယ်။
Related article >>> သိထားသင့်သော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ
သူကတော့ များသောအားဖြင့် စိတ်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြပေးတဲ့ Part of speech ပေါ့။ grammar ပိုင်းဆိုင်ရာအရတော့ အခြားသော Part of speech တွေနဲ့ ဆက်နွယ်မနေပါဘူး။ Interjection တွေက တစ်လုံးတည်းနဲ့လည်း စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ – Wow! Interjection တွေကို ပညာရပ်ပိုင်းဆန်ဆန်နဲ့ အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားတွေမှာ ထည့်ရေးလေ့မရှိပါဘူး။ Essay တွေမှာလည်း ထည့်မရေးမိအောင် သတိထားကြနော်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် Parts of Speech တွေအကြောင်းနှံ့စပ်ပြီထင်တယ်နော်။ ကိုယ်သုံးလိုက်တာ ဘယ် Speech လည်း သိနေပြီဆိုရင် မှားမှာမပူရတော့ဘူးပေါ့။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အက်မင်ဆွေးနွေးဖို့ကျန်သွားတာရှိရင် ဝေမျှပေးဦးနော်။
ကိုယျသုံးလိုကျတဲ့ စကားလုံးက ဘယျ Part of Speech မှနျးသိပွီဆိုရငျ သဒ်ဒါအထားအသို မှားမှာ သိပျစိတျမပူရတော့ဘူးလေ။
အင်ျဂလိပျစာစသငျမယျဆိုရငျ အခွခေံအကဆြုံးနဲ့ အသုံးအဝငျဆုံး၊ မသိမဖွဈကတော့ Eight parts of speech ဆိုတဲ့ ဝါစင်ျဂ (၈) မြိုးလို့ပဲ ပွောရမယျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားထဲမှာ ရှိသမြှ စကားလုံးတိုငျးကို part of speech နဲ့ခှဲခွားလို့ရတာမို့ ဘယျစကားလုံးဟာ ဘယျ part of speech ဖွဈတယျဆိုပွီး နားလညျထားမယျဆိုရငျ စာကွောငျးတှေ ကောငျးကောငျးတညျဆောကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Part of speech ဟာ ဘာကွောငျ့အရေးကွီးလဲဆိုတာရဲ့ နောကျထပျ reason တဈခုကတော့ Grammar pattern တှကွေောငျ့ပါ။ Noun ရှမှေ့ာဘာရှိတယျ၊ Adverb နောကျမှာ ဘာလိုကျတယျ၊ Conjunction ကို ဘယျနရောမှာသုံးရမယျ စသညျဖွငျ့ တိကတြဲ့သတျမှတျခကျြတှေ ရှိနတောကွောငျ့ ကိုယျသုံးလိုကျတဲ့စကားလုံးရဲ့ Part of speech ကို သိနမေယျဆိုရငျ အမှားအယှငျးမရှိ Grammar မှနျကနျတဲ့ Sentence တှေ ဖနျတီးနိုငျမှာပါ။
ဒါဆို အဲ့ Part of Speech ၈ မြိုးကို အကွမျးဖဉျြးအရငျပွောကွညျ့ရအောငျနျော။ ပါဝငျတာတှကေတော့ Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb, Conjunction, Preposition နဲ့ Interjection တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
မွနျမာစာကကျြခဲ့ရသလိုပါပဲ သကျရှိ၊ သကျမဲ့၊ ဒွပျရှိ၊ ဒွပျမဲ့ အရာအားလုံးပေါ့။ လူ၊ တိရိစ်ဆာနျ၊ အရာဝတ်ထု၊ အတှေးအမွငျ၊ ခံစားခကျြ။ ဒါတှအေကုနျလုံးဟာ နာမျပါ။
Noun ကို proper noun နဲ့ common noun ဆိုပွီး နှဈမြိုးပွနျခှဲပါတယျ။
Proper noun တှကေတော့ လူတှေ၊ နရောတှရေဲ့ နာမညျပါ။ Capital letter တှနေဲ့ ရေးရပါတယျ။
Common noun တှကေတော့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ သုံးနတေဲ့ noun တှပေါ။ Capitalize လုပျစရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာ – book, chair, bags.
Related article >>> Gerund ဆိုပွီး လူသိနညျးတဲ့ Ving form
အပွုအမူတှေ၊ အခွအေနတှေကေို ဖျောပွပေးတဲ့ စကားလုံးပါ။
မြားသောအားဖွငျ့ verb ဆိုရငျ action ကို ပွတယျဆိုပွီးပဲ သတျမှတျထားကွတာ မြားပါတယျ။ run, walk, play, sing စသညျဖွငျ့ပေါ့။
ဒါပမေဲ့ အခြို့ခြိတျဆကျပေးတဲ့ verb တှကေတြော့ action ကို မပွဘဲ ရှိမှု၊ ဖွဈမှုတှကေို ပွပါတယျ။ ဥပမာ – is, are, was, were. Verb တှကေို သုံးတဲ့အခါ အခြိနျအခါနဲ့ အခွအေနတှေကေို လိုကျပွီးတော့ Tense အမြိုးမြိုးကို အလိုကျသငျ့ ပွောငျးပေးဖို့လိုပါတယျ။
Noun ရဲ့ အစားသုံးပေးတဲ့ စကားလုံးတှပေါ။
မြားသောအားဖွငျ့ Noun ကို အရငျဖျောပွပွီးမှ Pronoun သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
ဥပမာ – Sam likes pizza, but he doesn’t like pasta. ဒီလိုမြိုးဘာလို့ သုံးရလဲဆိုရငျ တဈခါတဈရံ စာကွောငျးတဈကွောငျးမှာ တဈခုထကျပိုတဲ့ pronoun တှေ သုံးရတတျပါတယျ။ အဲ့အခါ ကိုယျသုံးခငျြတဲ့ Noun ကို အရငျမသုံးထားမိရငျ ဘယျဟာရဲ့ အစားထိုးလိုကျမှနျး မသိဘဲနဲ့ ရှုပျသှားနိုငျပါတယျ။
Adjective ကတော့ Noun ကို အထူးပွုပါတယျ။ လူတဈယောကျ၊ နရောတဈနရော၊ အရာဝတ်ထုတဈခုခုရဲ့ဝိသသေကို ပိုပျေါလှငျအောငျ သုံးပေးရတာမြိုးပေါ့။ ဥပမာ – Jim isatall and skinny man ဆိုတဲ့ sentence မှာ Tall ရော Skinny ရောက Jim ရဲ့ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကို ပိုပျေါလှငျအောငျ အားဖွညျ့ပေးပါတယျ။
Related article >>> Native Speaker လိုပွောနိုငျဖို့ collocations တှေ လလေ့ာကွမယျ
Adjective လိုအလားတူပါပဲ။ သူကတော့ Verb ကို အထူးပွုပွီးတော့ Verb နောကျမှာ ကပျပါရငျပါ၊ မပါရငျ စာကွောငျးရဲ့ နောကျဆုံးမှာ အတှမြေ့ားပါတယျ။ ဥပမာ – Helen walked slowly towards the door ဆိုတဲ့ စာကွောငျးမှာ slowly ဆိုတဲ့ Adverb က Helen ဘယျလိုလမျးလြှောကျသှားလဲဆိုတာကို ပျေါလှငျစပေါတယျ။
အခြိနျပွ၊ နရောပွပုဒျပါ။ ဒီဟာကတော့ တျောတျောရိုးရှငျးတဲ့အတှကျ အမြားကွီးပွောစရာတော့ မရှိဘူးလို့ ယူဆရပါတယျ။ အပျေါမှာပွထားတဲ့ ဥပမာ စာကွောငျးထဲမှာဆို towards က preposition ပေါ့။ အခွား preposition တှဖွေဈတဲ့ at, to, in front of ဒါတှလေညျး သိထားပွီးသား မဟုတျလား ယောငျးတို့ရေ။
စာကွောငျး တဈကွောငျးနဲ့ တဈကွောငျးဆကျဖို့၊ အကွောငျးအရာ တဈခုနဲ့ တဈခု ပေါငျးဖို့အတှကျ သုံးတဲ့စကားလုံးတှပေေါ့။ Conjunction မှာ လေးမြိုးခှဲထားပါတယျ။
Coordinating conjunctions >> for, and, nor, but, or, yet, so << Complete sentence တှကေို ဆကျစပျတာမြိုးအတှကျ သုံးပါတယျ။
Subordinating conjunctions >> after, as, although, before, before, if, once, since, unless, until, while << တှကေတော့ မပွညျ့စုံတဲ့ စာကွောငျးတှကေို ပွညျ့စုံတဲ့စာကွောငျးတှနေဲ့ တှဲသုံးခငျြတဲ့အခါ သုံးပါတယျ။
Conjunctive adverbs >> moreover, also, instead, however, therefore, in fact, finally,… << တှကေိုတော့ ရှမှေ့ာရေးထားတဲ့ စာကွောငျးကို နောကျကစာကွောငျးနဲ့ ဆကျစပျပွောခငျြတဲ့အခါ သုံးကွပါတယျ။
Correlative conjunctions >> both—and, too—to, either—or,…<< တှကေိုတော့ အကွောငျးအရာတူဖွဈစေ၊ မတူတာတှဖွေဈစေ တဈကွောငျးတညျးနဲ့ ဆှဲခြူံ့ပွီးရေးခငျြတဲ့အခါ သုံးကွပါတယျ။
Related article >>> သိထားသငျ့သော အင်ျဂလိပျစကားလုံးတှဲမြား
သူကတော့ မြားသောအားဖွငျ့ စိတျခံစားခကျြကို ဖျောပွပေးတဲ့ Part of speech ပေါ့။ grammar ပိုငျးဆိုငျရာအရတော့ အခွားသော Part of speech တှနေဲ့ ဆကျနှယျမနပေါဘူး။ Interjection တှကေ တဈလုံးတညျးနဲ့လညျး စာကွောငျးတဈကွောငျးဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ဥပမာ – Wow! Interjection တှကေို ပညာရပျပိုငျးဆနျဆနျနဲ့ အဆငျ့မွငျ့အင်ျဂလိပျစာ အရေးအသားတှမှော ထညျ့ရေးလမေ့ရှိပါဘူး။ Essay တှမှောလညျး ထညျ့မရေးမိအောငျ သတိထားကွနျော။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျ Parts of Speech တှအေကွောငျးနှံ့စပျပွီထငျတယျနျော။ ကိုယျသုံးလိုကျတာ ဘယျ Speech လညျး သိနပွေီဆိုရငျ မှားမှာမပူရတော့ဘူးပေါ့။ ဒီခေါငျးစဉျနဲ့ ပတျသကျလို့ အကျမငျဆှေးနှေးဖို့ကနျြသှားတာရှိရငျ ဝမြှေပေးဦးနျော။
Tagged English, Knowledge, language
Posted on June 17, 2018 July 25, 2018 Author Myat Moe
သြော်… ဒါတွေ ဒီလို ရှိတာကိုး…
Posted on November 9, 2018 Author Myat Moe
ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးတွေကြားက ကွဲလွဲမှုတွေ
Posted on September 8, 2017 September 8, 2017 Author Su Myat
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ်.. လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းပါတယ် 😀
အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ မာဂရက် နဲ့ ဝေါ်လတာတို့ရဲ့အမှု